४० प्रतिशत लाभास प्रस्ताव गरेको छिमेक लघुवित्त कस्तो छ ? - Lagani News
Home Analysis Share ४० प्रतिशत लाभास प्रस्ताव गरेको छिमेक लघुवित्त कस्तो छ ?
४० प्रतिशत लाभास प्रस्ताव गरेको छिमेक लघुवित्त कस्तो छ ?
Published: Monday, September 17, 2018 2018-09-17T21:56:00-07:00
Santosh Raj Bajgain September 17, 2018 Analysis, Share,
मुख्य गतिविधि : छिमेक लघुवित्त वित्तीय सस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष ७४/७५ को मुनाफाबाट लाभास प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले १८ प्रतिशत बोनस शेयर र २२ प्रतिशत नगद लाभांस प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित लाभास नेपाल रास्ट्र बैंकको स्वीकृति पछि र कम्पनीको आगामी साधारण सभाले अनुमोदन गर्नु पर्ने छ।
कम्पनीको वित्तिय अवस्था :
आर्थिक वर्ष ७४/७५ को चौथो त्रैमास र आर्थिक वर्ष ७३/७४ को चौथो त्रैमासलाई दाजेर हेर्दा :
कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब पुगेको छ। आर्थिक वर्ष ७४/७५ को प्रस्तावित बोनस शेयर पश्चात कम्पनीको पुँजी १ अर्ब १८ करोड पुग्ने छ।
कम्पनीको जगेडा कोष कम्पनीको पुँजी भन्दा धेरै छ। कम्पनीको जगेडा कोषमा १ अर्ब १७ करोड रुपैया संचित छ।
कम्पनीले आफ्नो व्यापार व्यवसाय फैलाउदै गएको प्रस्ट हुन्छ। कम्पनीले निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा राम्रो वृद्धि गरेको छ। कम्पनीले १६ अर्ब ५८ करोड रुपैया कर्जा प्रवाह गरेको छ। कर्जा प्रवाह ३३ प्रतशतले वृद्धि भएको हो।
पुँजी वृद्धि र आम्दानी :
कम्पनीको पुँजी २० प्रतिशतले वृद्धि हुदा कम्पनीको खुद नाफा १५ प्रतिशतले वृद्धि हुन् पुग्यो। पुँजीको तुलनामा नाफा वृद्धि हुन् नसक्दा कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानीमा सामान्य संकुचन आएको छ। प्रति शेयर आम्दानी ६९ दशमलव ११ रुपैयाबाट घटेर ६६ दशमलव ३९ रुपैया पुगेको छ। कम्पनीको प्रमुख आम्दानीको श्रोत खुद व्याज आम्दानी भने २० प्रतिशतले नै वृद्धि गर्न सफल भएको छ।
मुल्य आम्दानी अनुपात कति ?
सोमबारको बजार मूल्यलाई प्रति शेयर आम्दानी संग दाजेर हेर्दा मूल्य आम्दानी अनुपात १४ गुणा छ।
किताबी मूल्यको अवास्था के छ ?
कम्पनीको जगेडा कोषमा चुक्ता पुँजी भन्दा धेरै रकम संचित भएकाले कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ (किताबी मूल्य ) २१८ रुपैया छ। त्यस्तै मूल्य र किताबी मूल्यको अनुपात ४ गुणा छ।
लाभासको ईतिहास कस्तो ?
विगत ५ वर्षको लाभास हेर्दा कम्पनीले मिश्रित लाभास घोषणा गर्दै आएको छ। कम्पनी निरन्तर रुपमा पुँजी वृद्धि गर्दै गएको प्रस्ट हुन्छ।
लघुवित्तले आफ्नो व्यापार व्यवसाय फैलाउदै लागेको प्रस्ट देखिन्छ। अरु लघुवित्तको तुलनामा पुँजी धेरै भएकाले यस लघुवित्तको शेयर मूल्य दोश्रो बजारमा बढ्न नसकेको प्रस्ट देखिन्छ। लाभासको ईतिहास हेर्दा कम्पनीले लगानीकर्तालाई सधै खुशी बनाएको देखिन्छ। लाभासमा विस्वास गर्ने लगानीकर्तालाई यो शेयर उपयुक्त हुन सक्छ।